Muslimiinta Rohingya oo u sheegay warbaahinta caalamka xadgudubyada taliska Myanmar - Horn Future
Kyar Jong Tong(Horn Future)- Haweenka Muslimiinta ah ee Rohingya ayaa waxay saan usoo galeen inay ku wargeliyaan wariyayaasha arrinta ku saabsan inay laayihiin ragga qaba iyo hooyooyinkood iyo wiilashooda.
Arrintan ayaa waxay ka dambeeysay kadib markii loo oggolaaday inay galaan warbaahinta caalamka markii ugu horeeysay tuulooyin ku yaala gobolka Rakhine ee waqooyiga Myanmar halkaas oo ay ka dhaceen falal rabshado ah tan iyo bishii Oktober sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Wasaaradda warfaafinta ee taliska Myanmar ayaa iyadu wehelinaysay in ka badan 12 wariyayaal ah shisheeye oo matalayay warbaahinta caalamiga ah, oo ay ku jirto Reuters iyo kuwo ka socda gudaha toddobaadkii lasoo dhaafay.
Sarbada oo ah hooyo dhalinyaro ah ayaa waxay tidhi “Wiilkaygu ma’aha argagixiso,waxa la xidhay isaga oo qodanaya dhul beereed”.
Hooyadan oo gacmeheega ku sidata ilmo yar oo ay naaska nuujinayso ayaa waxay soo gashay socoto dheer iyada iyo haween kale si ay ugu sheegaan wariyayaasha in ragii qabay loo xidhay sababo aanan dhab ahayn.
Ciidanka taliska Myanmar ayaa weeraray tuulada Mongdo oo ay deggen yihiin Muslimiinta Rohingya oo aanan haysan waraaqaha dhalasho ee dalka bishii November sida ay sheegtay warbaahintan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 75 kun oo qof ay u firxadeen dhinaca soohdinta ee u dhaw dalka Bangladesh oo ay galeen dalkaasi.
Baadhayaasha Qaramada Midoobey oo la kulmay qaxootiga Rohingya ayaa sheegay in sida dhabta ah ay ku eedeeysan yihiin ciidamada ammaanka ee taliska inay gaystaan kufsi guud oo loo gaysay haweenka Muslimiinta ah iyo gubitaan iyo sido kale inay ku kaceen dilal intii lagu guda jiray howlgaladan kuwaas oo ah dambiyo ka dhanka ah buni’aadanka.
Habab bahalnimo oo naxariis daro ah
Wariyayaashan ayaa waxay ku sugnaayeen ku dhawaad 2 maalmood magaalada Bomikong ee degmada Mongdo ee gobolka Rakhine ee xiisado ka jirto ee halkaas oo talisku u geeyay inuu tuso goobo uu ku sheegtay inay fadhiisiin u ahayd kooxo hubaysan.
Waxa wariyayaashan sido kale la geeyay Kyar Jong Tong oo mid ka mid ah 3da tuulooyin ee ay codsadeen wariyayaashu in la geeyo intii ay ku guda jireen booqashadan.
Waxa markii ay la kulmeen koox ka mid ah wariyayaasha dadka deggen tuulooyinkan ee ay la hadleen iyaga oo aynan la joogin ciidamada ammaanka ayaa waxa isla markii ba si degdeg usoo muuqatay eedeemo ah inay ciidamada amaanku ku kaceen xadgudubyo.
Waxa ciidamada talisku ay xidheen 13 wiilal ah oo da’doodu ka yar tahay 8 jir kuwaas oo lagu qabtay intii lagu guda jiray hawlgalo ammaan bishii Mars,iyada oo lagu daray magacyadooda liiska 423 qof oo lagu eedeeyay iyada oo loo cuskanayo (Xeerka Ururada sharci daradda ah), kaas oo jiray xilliyadii gumeysiga.
Barre kamid ah tuulada Kyar oo codsaday in aanan la magacaabin cabsi uu ka qabo aargoosi,ayaa sheegay in ugu yaraan 32 qof oo katirsan tuuladan la qabtay iyada oo 10 kamid ah la dilay,waxana uu qiyaasay in kala badh kamid ah dadka tuulada oo ah 6 kun oo qof ay ka firxadeen intii lagu guda jiray falalka lagu barakicinayo.
Dadka nolosha lagu gubo ilaa dhimasho
Waxa La lamoti oo da’deedu ay tahay 23 jir iyo 2 haween oo kale oo kamid ah dadka deggen tuulo kale ay sheegeen inay ka heleen dambas hadhaagii maydka aabbeheed,waxana ay tilmaamtay sida aabbaheed garbo-duub loogu xidhay kadibna lagu tuuray aqal gudihii,dabna la qabadsiiyay ilaa uu ka dhimanayay.
Waxa haweenaydan ay sheegtay in markaas kadib hooyadeed la xidhay kadib markii ay gudbisay cabashada ku saabsan dambiga dilkan oo talisku ku tilmaamay been abuur,iyada oo lagu xukumay hooyadeed muddo 6 bilood ah.
« NY:Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’	» Waxa Senegal ku dhintay 8 qof kadib is-jiidh-jiidh dhacay intii lagu jiray ciyaar kubadda cagta